कुन देश मा भारतीय को लागी अधिक रोजगार को अवसर छ?
अक्टोबर 3, 2021 मैत्री झा भारत, जब
कुन देशमा भारतीयहरु को लागी अधिक रोजगार को अवसर छ? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, न्यूजील्याण्ड, क्यानाडा, र एक हदसम्म, पोर्चुगल जस्ता देशहरु भारतीयहरु को लागी बस्न र काम गर्न को लागी सबैभन्दा लोकप्रिय स्थानहरु मा छन्। संयुक्त राज्य अमेरिका
सेप्टेम्बर 15, 2021 मैत्री झा भारत, यात्रा, भिसा
कुन भिसा अफगानिस्तान बाट भारत को लागी आवेदन गर्ने? ई-आपतकालीन X-Misc भिसा भारतले अफगानिस्तानका नागरिकहरुलाई जारी गरिएका सबै भिसा रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ। तर तपाइँ तल दिईएको सरकारी साइट मा एक विशेष ई-भिसा को लागी आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। विशेष ई-भिसा
केरला मा रोजगार
सेप्टेम्बर 3, 2021 एन्टिका कुमारी भारत, जब
केरला मा सरकारी जागिर को हराएको आकर्षण, जो विगत मा उम्मेदवारहरु लाई आकर्षित गरीएको छ, पुनरुत्थान हो र यहाँ बस्न को लागी छ। सरकारी रोजगार वादा गर्न सक्छ र स्थिरता र सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छ कि एक निजी काम गर्न सक्दैन। केरला सरकारी रोजगार सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ
भारतीयहरुको लागी इजिप्ट भिसा
अगस्ट 20, 2021 शुभम शर्मा मिश्र, भारत, भिसा
इजिप्ट उत्तरी अफ्रिका मा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको अरब देश हो। यो भारत संग एक लामो मित्रता भएको छ, र भारतीय नागरिकहरु नियमित रूप देखि व्यापार र फुर्सत को लागी मिस्र को यात्रा। पर्यटन को लागी इजिप्ट भ्रमण गर्न को लागी, तपाइँ पहिले बाट अनुमति प्राप्त गर्नु पर्छ
अगस्ट 6, 2021 एन्टिका कुमारी भारत, यात्रा, भिसा
भारत एक unmistakably अतिथि सत्कार देश हो कि सम्मान र स्नेह संग अतिथिहरु लाई व्यवहार गर्दछ। एउटा राष्ट्र जो अन्धो मात्र एक विश्वास मा विश्वास गर्दछ: "अतिथि भगवान को बराबर छ।" त्यहाँ धेरै संस्कृतिहरु, गहिरो जराहरु को यो भूमि मा खोज्न को लागी धेरै छ
जुलाई 30, 2021 शुभम शर्मा बैंक, भारत, पैसा
भारत मा, जहाँ सरकार IndiaStack, संसारको सबैभन्दा ठूलो खुला API- आधारित टेक्नोलोजी को सहयोग मा सम्पूर्ण बैंकिंग पूर्वाधार को डिजिटलीकरण गर्न को लागी एक बैंक खाता भएको कुनै पनि वित्तीय सेवा को उपयोग गर्न वा एक खरीद गर्न को लागी एक आवश्यकता भएको छ।
पुणेमा कसरी काम पाउने?
जुलाई 16, 2021 एन्टिका कुमारी भारत, जब
पुणे भारतको सबैभन्दा ठूलो आईटी हबमध्ये एक हो, त्यहाँ ठूलो संख्यामा आईटी सफ्टवेयर कम्पनीहरू छन्। पुनामा आईटी फ्रेशरहरूको असंख्य संभावनाहरू छन्। नतिजा स्वरूप, भारत भर बाट धेरै उम्मेद्वारहरू क्वेस्टमा पुणे पुग्न लागेका छन्
बंगलादेशमा रोजगार कसरी पाउने?
जुलाई 12, 2021 एन्टिका कुमारी भारत, जब
हामीले तपाईको लागि ठ्याक्कै त्यस्तै चीज पाएका छौं यदि तपाई बंगलादेशको केहि उत्तम भुक्तान गर्ने व्यवसायको बारेमा जान्न चाहानुहुन्छ। हामी सबैभन्दा लोकप्रिय कामहरू हेर्दछौं, कसरी तिनीहरूलाई प्राप्त गर्ने, र तपाईंको क्यारियरको बाटोमा कसरी शुरू गर्ने। मा
२०२१ मा सर्वश्रेष्ठ किचन ग्याजेटहरू
जुन 28, 2021 शुभम शर्मा भारत, यात्रा
सामान्यतया, भान्सा घर तपाईको घरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अंश हुन्छ। हामी सामान्य रूपमा प्रत्येक दिन भान्छामा एक टन विभिन्न उपकरण प्रयोग गर्दछौं। त्यहाँ धेरै रोजगारहरू पनि छन् जुन गर्न गाह्रो छ र केही नयाँ उपकरणहरू
123 ...9अर्को पोस्टहरू»